Kung Fu Wisa –tompondakan’i Madagasikara Nisongadina ireo mpikatroka avy any amin’ny faritra
Basket Afroligue 2019 Ny Cospn Malagasy no hisolontena ny Zone 7
Afa-bela tamin’ny Premium Cobras Seychelles tamin’ny talata teo ny Cospn Madagasikara rehefa nandresy azy ireo tamin’ny 86-70 teo amin’ny lalao miverin’ny fifaninanana CCOI Basket 2018 notontosaina tany Seychelles.
Tontosa soa aman-tsara tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina omaly alahady 20 aogositra 2017 ny fiadiana ny ho tompondaka nasionalin’ny taranja Kung Fu Wisa eto Madagasikara miaraka amin’ny Me Avoko Rakoarijaona.
Mpikatroka 74 avy amin’ny ligim-paritry ny Kung Fu Wisa 10 manerana an’i Madagasikara no nandray anjara tamin’ity fifaninanana ity ka ny 60 teo amin’ny sehatry ny Kung Fu Light na ady mivantana ary ny 14 teo amin’ny Tao Lue na karazana Kata amin’ny taranja hafa. Ny ligin’Itasy no tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana noho ny lozam-piarokodia nihatra tamin’ny delegasionin’izy ireo fa nandray anjara tamin’ny fivoriambe niaraka tamin’ny ministera kosa izy ireo. Mpikatroka niisa 52 no notoloran’ny Fanjakana Malagasy fankasitrahana nosoloin’ny minisitra Anicet Andriamosarisoa tena. Nilamaina tamin’ny ankapobeny ny tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena na dia feno hipoka tanteraka aza. Nambaran’ny teknisianin’ity taranja ity fa niakatra avo dia avo noho ny tamin’ny taon-dasa ny haavo teknikan’ireo mpikatroka avy any amin’ny Faritra ivelan’Antananarivo tamin’ny ankapobeny.
Ireo tompondakan’i Madagasikara :
Kung Fu Light
Vehivavy Open : Randrianirina Avotra (Analamanga)
Lehilahy : -55kg : Maherivoatse Ermana (Androy)
-60kg : Iriavy Arovandraza Jocelin (Androy)
-65kg : Rahaingonirina Nomenjanahary Jean Bosco (Amoron’Imania) -70kg : Razafimanantsoa Tafitaniaina (Atsinanana)
-75kg : Randrianjanahary Louis Pascal (Amoron’Imania)
-80kg : Rakotondrazay Maminiaina Hervé (Analamanga)
+80kg : Rafanomezantsoa Tokiniainga Valson (Analamanga)
Tao Lue (Main Nue)
Vehivavy : Rasoarimalala Bernadette (Analamanga)
Lehilahy : Rasamoelina Sylvaina Josoa (Boeny)
Tao Lue (Armes)
Vehivavy : Raùmiliarisoa Georgette (Analamanga)
Lehilahy : Randrianarivo Velontsoa Fidson (Alaotra Mangoro)